Xildhibaan Maxamuud Abuukaate oo dhaleeceeyay madaxweyne Farmaajo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaan Maxamuud Abuukaate oo dhaleeceeyay madaxweyne Farmaajo
Xildhibaan Maxamuud Abuukaate oo mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dowladda madaxweyne Farmaajo iyo hay’adaheeda ammaanka ku dhaleeceeyay inay dayaceen ammaanka shacabka Soomaaliyeed iyo mas’uuliyiinta dalka oo ay xildhibaanada ka mid yihiin.
Xildhibaanka oo habeenkii xalay ahaa ka bad-baaday qarax lagu qaarajin lahaa ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay ka baxday dhammaan ballamihii ay u qaadday shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada golaha shacabka, isagoona dhinaca kale ku hanjabay in dowladda uu madaxweynaha ka yahay Farmaajo ay kula xisaabtami doonaan dhibaato walba oo soo gaara shacabka iyo xildhibaanada Soomaaliyeed.
Sidoo kale, wuxuu xildhibaanka sheegay in balan-qaadyadii madaxweyne Farmaajo ee uu kusoo galay ololahiisa doorasho ay haatan u muuqdaan kuwa meesha ka baxay, taas oo uu ku tilmaamay inay tahay niyad-jab soo wajahay shacabka, xaaladuna marba marka kasii dambeeyso ay kasii dareeyso.
“Waa nasiib-darro in madaxweynihii Soomaaliyeed markii uu ololaha ku jiray inuu baarlamaanka kahor yiraahdo waxaan si gaar ah ammaankooda u suggi doonnaa xubnaha baarlamaanka, taasi badelkeeda waxaa aragnaa dayacaad iyo iska xil saarid la’aan arrinkaasi ka jirta, waxayna arrintaasi keenaysaa wal-wal weyn oo laga qabo ka run sheegida ballamada uu qaaday inuu fullin doonno iyo inuusan fullin doonin” Sidaasi waxaa yiri xildhibaan Maxamuud Abuukaato.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray xildhibaan Maxamuud Abuukaate ayaa kusoo beegmaya xilli habeenkii xalay uu ka badbaaday qarax lagu weeraray gaari uu watay, kaasoo dhalliyay dhaawac soo gaaray isaga iyo seddax ka mid ah ilaaladiisa.